Munaasibad Balaadhan Oo Loogu Mahadcelinayay Cududa Shaqaalaha Iyo Hirgalinta GTP1 Looguna Gogol Xaadhayay Qorshaha GTP2 Ayaa Xalay Kadhacday Madasha SMCX. - Cakaara News
Munaasibad Balaadhan Oo Loogu Mahadcelinayay Cududa Shaqaalaha Iyo Hirgalinta GTP1 Looguna Gogol Xaadhayay Qorshaha GTP2 Ayaa Xalay Kadhacday Madasha SMCX.
Jigjiga(CN) Isniin.May.11.2015, munaasibadan oo ahayd mid si meeqaam sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu saraysa DDSI oo uu ka mid yahay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, kuxigeenka madaxwaynaha DDSI ahna waasiirka madaxtooyada marwo Sucaad Axmed Faarax, Gudiga fulinta, wasiirada DDSI, shaqaaaha dawlada, qaab dhismeedka kala gadisan ee bulshada DDSI, qurbajoogta iyo marti sharaf kale.
Waxaana ugu horayntii ka hadlay xafladaasi madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar isaga oo ugu horayntii u mahad celiyay dhamaan shaqaalaha DDSI sida ka go'naanshaha leh ee ay u hirgaliyeen qorshayaashii horumarineed ee xukuumada DDSI u yaalay qorshaha isbadalka iyo kobaca dhaqaalaha ee 5 sano ee ugu danbeeyay. Waxaa uu madaxwaynuhu sheegay in dhinac walba (sector kasta) shaqooyin badan laga qabtay islamarkaana loo baahnayahay in looga mahad celiyo iyadoo kaalmaha iyo waxqabadkooda loo eegayo.
Sidoo kale waxaa uu u madaxwaynuhu carabka ku dhuftay halgan-faneedka iyo kaalinta ay kooxaha fanka iyo suugaantu ku leeyihiin hirgalinta horumarka gaar ahaan dhinaca wacyigalinta iyo xidhiidhka dadwaynaha.
Madaxwaynuhu waxaa uu sheegay in sector walba laga abaal mariyo guulaha waxqabad iyadoo loo eegi doono kaalinta uu kulahaa hirgalinta qorshayaasha horumarineed ee DDSI. Waxaa kale oo uu madaxwayne ka warbixiyay aadna ugu dheeranu diyaar garowka wareega labaad ee qorshaha isbadalka iyo koboca dhaqaalaha ee 5 sano ee soo socota iyo meelaha diirada la saaridoono, iyadoo laga duulayo halka lataagan yahay, awooda iyo meesha la rabo in lagaadho.
Waxaa kale oo madaxwaynuhu intaas kudaray in haatan loo diyaar garoobay doorashadii 2007 T.I iyo cod bixinta oo dhamaan dalka iyo deegaankaba kadhici doonta maal maha fooda inagusoo haya oo kuaadan 16 bishan Ginbood ee hada lagu jiro.
Munaasibada ayaa waxaa lagusoo bandhigay filim dokumentariyo kawarbixinayay waxqabadkii xukuumada iyo guulihii hirgalay sida Waxaqabadkii Dhanka Biyaha, jidadka iyo isku xidhka dadwaynaha. Sidoo kale waxaa lagusoo bandhigay halgan-faneedkii hirgalay ee kaalmaha hore kagalay wacyigalinta nabadgaliyada iyo horumarka sida abwaanada, gudoomiyasha, kooxaha, hobolada iyo fanaaniinta aadka uga qayb qaatay.